कति कमायो सलमान खानको ‘भारत’ले तीन दिनमा ? - Experience Best News from Nepal
कति कमायो सलमान खानको ‘भारत’ले तीन दिनमा ?
प्रकाशित मिति : शनिबार, जेष्ठ २५, २०७६
बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको नाममा रहेको रेकर्ड तोडेको चलचित्र ‘भारतले’ले तीन दिनमा ९८ करोडभन्दा माथि ग्रस कलेक्सन गरेको छ । इदको अवसर पारेर रिलिज भएको चलचित्र ‘भारत’ले पहिलो दिन ४२ करोड ३० लाख कलेक्सन गरेको थियो ।
दोस्रो र तेस्रो दिन क्रमशः ३१ करोड र २५ करोड कलेक्सन गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । ‘भारत’ सलमानको करिअरमा पहिलो दिन सबैभन्दा धेरै कलेक्सन गर्ने चलचित्र बनेको छ । यसअघि सलमानको ‘प्रेम रतन धन पायो’ले पहिलो दिन ४० करोड ३५ लाख कलेक्सन गरेको ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शले ट्विट गरेका छन् ।
बलिउडमा पहिलो दिन सर्वाधिक कमाइ गर्ने चलचित्र आमिर खानको ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’ हो । ‘भारत’ लाई समीक्षकले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । तरण आदर्शले चार स्टार दिएको चलचित्रले आफूलाई सबैभन्दा ठूलो खुसी दिएको र यो नै आफ्ना लागि सबैभन्दा ठूलो सम्मान भएको सलमानले आफ्नो ट्विटमा लेखेका छन् ।